နှလုံးသွေးကြောလမ်းလွှဲခွဲစိတ်ကုသမှု (အသေးစိတ်) | Singapore Personalized Patient Care
Singapore Personalized Patient Care
သင့်တွင်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါရှိသည် ဆိုလျှင် သင့်နှလုံးသွေးကြောများသည် မာပြီး၊ ကျဉ်းနေပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင့်နေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းနှင့်ဆေးဖြင့် ကုသခြင်းတို့က ရောဂါကို မသက်သာစေလျှင် သင့်ဆရာဝန်က နှလုံးသွေးကြောလမ်းလွှဲခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရန် သင့်ကို အကြံပေးပါလိမ့်မည်။
ခွဲစိတ်မှုတွင် နှလုံးခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ခြေထောက်မှသွေးပြန်ကြော (သို့) လက်/ရင်ဘတ်ရှိ သွေးလွှတ်ကြောကို ယူပြီး နှလုံးသွေးကြော၏ အလွန်ကျဉ်းနေသော (သို့) ပိတ်နေသောနေရာ အပေါ်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းကို လမ်းလွှဲသွေးကြောဖြင့် ဆက်လိုက်ပါသည်။ ဤသို့အားဖြင့် လိုအပ်နေသော နှလုံးကြွက်သားများသို့ လမ်းလွှဲမှတစ်ဆင့် သွေးများရောက်သွားပါမည်။ အချို့လူနာများသည် လမ်းလွှဲတစ်ခုထက် ပိုလိုအပ်တတ်ပါသည်။
ကျဉ်းနေသော (သို့) ပိတ်နေသော နှလုံးသွေးကြောကို ပြန်ပြင်ခြင်းဖြင့် ပြန်ချဲ့၍ မရတော့သောအခါ (သို့) stent ကို ကျဉ်းနေသောနေရာတွင် ထည့်ခြင်း လုပ်၍မရသောအခါ နှလုံးသွေးကြောလမ်းလွှဲခွဲစိတ်ကုသမှုဖြင့် ကုသရပါသည်။
Bypass သည်လည်း ပြန်ပိတ်သွားနိုင်ပါသေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ထိုသို့ပြန်ပိတ်ခြင်းသည် ခွဲစိတ်ပြီး နောက် ဆယ်နှစ်ခန့် ကြာသောအခါ ခွဲစိတ်ထားသည့် လူနာ၏ ၁၀%တွင် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
Bypass surgery ကို အောက်ပါ လူနာအမျိုးအစားများတွင် လုပ်ရနိုင်ပါသည်။
နှလုံးကြောင့်ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို ဆေးပေးခြင်းဖြင့် မသက်သာသူများ
ဘောလုံးဖြင့် နှလုံးသွေးကြောချဲ့ခြင်းလုပ်ဆောင်ရန် အဆင်မပြေသည့်သူများ
ဘယ်ဘက်အဓိက နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းသူများ (ရောဂါလက္ခဏာ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ယခုခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသက်ပိုရှည်လာနိုင်ကြောင်း သေချာသူများ)
Bypass surgery ကို အောက်ပါ အခြေအနေများရှိလျှင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
နှလုံးသွေးကြောများအလွန်ကျဉ်းပြီး နှလုံးကြွက်သားများကို သွေးရောက်ရှိမှုအလွန်နည်းနေသဖြင့် ဆိုရွားသော ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း ခံစားနေရသူများ (ဆေးပေးခြင်းဖြင့် မသက်သာသောအခါ) (သို့) နှလုံးသွေးကြော များစွာတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပိတ်သောအခါ။
နှလုံးသွေးကြောများစွာပိတ်နေပြီး နှလုံး၏အဓိကညှစ်ပေးသော အခန်းဖြစ်သည့် left ventricle ကောင်းကောင်းအလုပ် မလုပ်တော့သည့်အခါ။
နှလုံးသွေးကြောပိတ်နေသည့် အခြေအနေသည် ဘောလုံးဖြင့် သွေးကြောချဲ့ခြင်းဖြင့် ကုသ၍မရနိုင်သည့်အခါ (သို့) ယခင်က သွေးကြောချဲ့ထားဖူးပြီး သွေးကြောပြန်ကျဉ်းခြင်းဖြစ်သည့်အခါ။
Bypass surgery နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသေးစိတ် အကြောင်းအရာများကို အောက်တွင် ဆက်လက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်လုပ်နေကျ Bypass surgery – ဤခွဲစိတ်မှုတွင် နှလုံး-အဆုတ်စက် heart-lung machine ကို အသုံးပြုပါသည်။ အလွန်အေးသည့် ပိုတက်စီယမ်များများပါသော အရည်ဖြင့် နှလုံးခုန်ခြင်း ခဏရပ်အောင် လုပ်ပြီး heart-lung machine စက်က နှလုံးနှင့် အဆုတ်အလုပ်ကို ခဏ တာဝန်ယူ လုပ်ပေးနေစဉ် ခွဲစိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်း။ ခုန်မနေသော နှလုံးသည် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို ခွဲစိတ်ရလွယ်ကူစေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သွေးကြောလေးများကို ပြန်ဆက်ရသည်မှာ အလွန်တိတိကျကျ လုပ်ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးစွဲခဲ့ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော အကျိုးဆက်ကို ရစေပါသည်။
Off-pump Coronary Bypass (OPCAB) – ယခုနည်းကို beating heart surgery ဟုလည်း ခေါ်ကြပါသည်။ ဤနည်းတွင် heart-lung machine ကို မသုံးပဲ စပါယ်ရှယ်ကိရိယာကို သုံး၍ နှလုံးကို တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ပြီးခွဲစိတ်ပါသည်။ ဤနည်းကို လူတိုင်းတွင် သုံးလို့မရပါ။ လူနာ၏ နှလုံးသွေးကြောအနေအထားနှင့် graft လိုအပ်သည့် အပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရပါသည်။ အချို့သော တွေ့ရှိချက်များအရ ဤနည်းသည် လူနာအား ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် ခွဲစိတ်ပြီး သွေးထွက်ခြင်းများကို လျော့နည်းစေပြီး လူနာအားပိုမြန်မြန် နာလံထစေပါသည်။
Minimally Invasive Bypass Surgery (MIDCAB) – Minimally invasive direct coronary artery bypass အထူးတီထွင်ထားသော ကိရိယာများအသုံးပြုပြီး သေးငယ်သော ခွဲထားသည့်နေရာမှတစ်ဆင့် ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုနည်းဖြင့် ခွဲစိတ်ရာတွင် နှလုံးခုန်ရပ်အောင်လုပ်စရာ လိုချင်မှလိုပါသည်။ အချို့သောလူနာများသည် ၄၈-နာရီအတွင်း ဆေးရုံမှဆင်းနိုင်ပါသည်။ ခွဲစိတ်ရာ သေးသေးဖြင့် ခွဲစိတ်လို့ရသော လူနာများတွင်သာ ယခုခွဲစိတ်နည်းကို အသုံးပြု၍ရပါသည်။ ဤနည်း၏ကောင်းသောအချက်များမှာ- ဆေးရုံတက်ရက်တိုခြင်း၊ မြန်မြန်နာလံထခြင်းနှင့် သွေးထွက်မှုနည်းခြင်း (သွေးဆုံးရှုံးမှု နည်းခြင်း) တို့ဖြစ်ပါသည်။
ခွဲစိတ်နေစဉ် သွေးထွက်များမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် မခွဲစိတ်မီတွင် လူနာအနေဖြင့် မိမိလက်ရှိသောက်နေသော အက်စပရင် (သို့) အချို့သော အခြားဆေးများရပ်ထားရန်လိုပါသည်။
ဆေးလိပ်သောက်သူများအနေဖြင့် သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းလာစေရန်အတွက်နှင့် သွေးထွက်နည်းစေရန်အတွက် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ချက်ခြင်းရပ်ထားရန်လိုပါသည်။
ခွဲစိတ်နေစဉ် မအန်စေရန်အတွက် မခွဲစိတ်ခင် ညသန်းခေါင်မှစပြီး မည်သည့်အရာမှ မစားမသောက်ရပါ။
ရောဂါပိုးမ၀င်စေရန်အတွက် ရင်ဘတ်၊ ခြေထောက်နှင့် ပေါင်ခြံရှိ အမွှေးများကို ရိတ် (သို့) တိုတိုညှပ်ထားရန် လိုပါသည်။
မေးဆေးအထူးကုက သင်၏ရောဂါရာဇ၀င်ကို အသေးစိတ်မေးမြန်းပြီး မေ့ဆေးပေးမည့် အကြောင်းနှင့် မနာမကျင်သော ခွဲစိတ်မှုအကြောင်းကို ရှင်းပြပါလိမ့်မည်။
ပုံမှန်အခြေအနေအရ လူနာများကို ခွဲစိတ်မည့် နံနက်ကျမှ ဆေးရုံတက်စေနိုင်ပါသည်။
နှလုံး၏အနေအထားနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံကို သိနိုင်ရန်အတွက် Echocardiogram (ultrasound of the heart) ကို ပြုလုပ်ပါသည်။
ခွဲစိတ်မှုကို ရှုပ်ထွေးလာနိုင်စေသော နှလုံးသွေးကြောရောဂါနှင့် အခြားသော နှလုံးနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် Cardiac catheterization ကို ပြုလုပ်ပါသည်။
အခြားသော အခြေခံ စစ်ဆေးခြင်းများ – သွေးစစ်ခြင်းအချို့၊ ECG နှင့် အဆုတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းများ
လူနာတစ်ဦးချင်းအပေါ်မူတည်ပြီး အခြားလိုအပ်သော အထူးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ လုပ်ရနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- Electrophysiology study (EP), Nuclear studies, etc.
လုပ်ရသည့် bypass အရေအတွက်နှင့် လုပ်ကိုင်ရသည့် နည်းလမ်း၏ ရှုပ်ထွေးမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲစိတ်မှုသည် ၃ – ၆ နာရီခန့် ကြာတတ်ပါသည်။ မေ့ဆေးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုတွင် နှလုံးသွေးကြော ၃-၄ ခုကို bypass လုပ်ရလေ့ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ၆-၇ ခုအထိ လုပ်ရသည်များလည်း ရှိပါသည်။ ခွဲစိတ်ခန်းထဲတွင် သင်၏ဆီးအိမ်ထဲသို့ ဆီးပိုက်တစ်ခုထည့်ပြီး ခွဲစိတ်နေစဉ်နှင့် ခွဲစိတ်ပြီးအချိန်များတွင် ဆီးများကို အလိုအလျောက်စီးဆင်းစေပါသည်။
အများစုသော bypass surgery များကို ယခင်ကတည်းက လုပ်နေကျပုံစံအတိုင်းလုပ်ပါသည်။ နှလုံးခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ရင်ဘတ်၏ အလယ်ခေါင်sternal notch မှ စပြီး ၄င်းရင်ဘတ်အရိုး Sternum အောက်ဆုံးအထိ အထူးခွဲစိတ်လွှကို အသုံးပြုပြီး နှစ်ခြမ်း ခွဲလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် အရိုးနှစ်ခြမ်းကို ဟ လိုက်ပြီး နှလုံးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပါသည်။ လက်မှ (သို့) ပေါင်မှ သွေးကြောကို ယူပြီး သွေးကြောပိတ်နေသည့်နေရာကို ကျော်ပြီး Bypass ကို ဆက်ရာတွင် အလွန်သေးငယ်သော သွေးကြောများကို ဆက်ရသည့်အတွက် နှလုံးခုန်နေခြင်းကို ရပ်ထားရတတ်ပါသည်။
Cardiopulmonary bypass machine နှလုံးနှင့်အဆုတ်လမ်းလွှဲစက်ကို နှလုံးထဲသို့ ပိုက်များဖြင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပြီးနောက်တွင် ထိုစက်မှတစ်ဆင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းသို့ သွေးပို့ပေးခြင်းကို စက်က ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့နောက် နှလုံးခုန်ရပ်အောင် ပိုတက်စီယမ်များများပါသော အလွန်အေးသည့်အရည်ကို နှလုံးပေါ်တွင်ဖြန်းလိုက်သည်။ နှလုံးခုန်ရပ်သွားသောအခါ နှလုံးသွေးကြောပိတ် နေသည့်နေရာကို ကျော်၍ နှလုံးသွေးကြောများကို ဆက်ရပါသည်။ လမ်းလွှဲလိုက်သည့် သွေးကြောလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် နှလုံးကြွက်သားများသို့ သွေးရောက်စေရန်ဖြစ်သည်။ Internal mammary artery (သို့) လက် (သို့) ပေါင်မှ သွေးကြောကို အသုံးပြုပါသည်။
နှလုံးသွေးကြောပိတ်သည့် နေရာအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး လမ်းလွှဲလုပ်ရသည့် နေရာတစ်ခုထက်ပိုနိုင်ပါသည်။ လမ်းလွှဲအားလုံး ပြီးသွားသည့်အခါ စက်မှတစ်ဆင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းသို့ သွေးလည်ပတ်စေခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပြီး နှလုံးမှတစ်ဆင့်ပြန်လည် အလုပ်လုပ်စေပါသည်။ နှလုံးခုန်ရပ်တန့်အောင် လုပ်ထားခဲ့ရပါက နှလုံးပြန်ခုန်အောင် ၀ိုင်ယာကြိုးလေးများသုံးပြီး လုပ်ပေးရပါသည်။ ထို့နောက် ရင်ဘတ်အရိုးကို စတီးကြိုးများအသုံးပြု၍ ပြန်ဆက်ပြီးနောက် အရေပြားကို ပြန်ချုပ်ပါသည်။ သင်၏ရင်ဘတ်အတွင်းသို့ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းနှလုံးတစ်ဝိုက်တွင် ထပ်ထွက်လာမည့်သွေးနှင့် အခြားအရည်များ အပြင်သို့ထွက်လာနိုင်အောင် ပိုက်ငယ်ကို ထည့်ထားပါမည်။ ထိုပိုက်များကို စုပ်သည့် စက်နှင့်ဆက်ထားပါသည်။ မကြာခင်တွင်ထိုပိုက်ကို ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါမည်။ ရင်ဘတ်အရိုးသည် ၆-၈ ပတ်အတွင်း ပြန်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အားလုံးသေချာပြန်ဆက်သွားပြီးချိန်တွင် ယခင်အတိုင်းပြန်ပြီး သန်မာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ခွဲစိတ်ပြီးချိန်တွင် လူနာကို အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် ICU တွင်ထားပါမည်။ ခွဲပြီးစနာရီအနည်းငယ်အတွင်း လူနာအိပ်နေစေရန်အတွက် ဆေးပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်နိုးလာချိန်တွင် လူနာသည် တုန်တုန်ရင်ရင်၊ ဖျော့တော့တော့နှင့် puffy ဖောင်းနေသလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ အထူးစက်များ၊ ပိုက်များနှင့်ဆက်ထားသဖြင့် လူနာလန့်သွားခြင်း မဖြစ်စေသင့်ပါ။
အသက်သေချာရှူနိုင်စေရန်အတွက် အသက်ရှူပိုက် ကို ပါးစပ်မှတစ်ဆင့် လေပြွန်ထဲသို့ထည့်ထားပါသည်။ ထိုပိုက်ကို အသက်ရှူစက်ဖြင့် ဆက်ထားသည်။ ထိုပိုက်ကို လူနာသတိပြန်ရလာသည်နှင့် ဖြုတ်လိုက်မည်ဖြစ်ပြီး မိမိဖာသာ အသက်ပြန်ရှူနိုင်ပါလိမ့်မည်။
မအန်စေရန်နှင့် အစာအိမ်ဖောင်းမနေစေရန် နှာခေါင်းပိုက်ကို နှာခေါင်းမှတစ်ဆင့် အစာအိမ်ထဲသို့ ထည့်ထားပါမည်။
ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှ ဆီးစွန့်ထုတ်မှုကို တိုင်းတာနိုင်ရန် ဆီးပိုက်ကို ဆီးအိမ်ထဲထည့်ထားပါမည်။
ရင်ဘတ်အတွင်းတွင် အထဲမှ အရည်များထုတ်ရန်အတွက် ပိုက်တစ်ချောင်း (သို့) နှစ်ချောင်းကို ထည့်ထားပါမည်။
အရည်နှင့် သွေးသွင်းရန်အတွက် သွေးကြောများအတွင်းသို့ ပိုက်များသွင်းထားပါမည်။
သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းရန် လက်ကောက်ဝတ်တွင် ပိုက်တစ်ခုရှိမည်ဖြစ်သည်။
နှလုံးကောင်းကောင်းညှစ်မညှစ်ကို သိနိုင်ရန်နှင့် စစ်ဆေးရန်သွေးလိုပါက လွယ်လွယ်ကူကူ ထုတ်လို့ရရန်အတွက် လည်ပင်းသွေးကြောတစ်ခုတွင် ပိုက်တစ်ချောင်းထည့်ထားပါမည်။
နာကျင်မှုမခံစားရစေရန်အတွက် ဆေးများကို လိုအပ်သလိုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ခွဲပြီး ပထမနေ့တွင် အထက်ဖော်ပြပါ မိမိကိုယ်ထဲတွင် ထည့်ထားသော ပိုက်များထဲမှ အများစုကို ဖြုတ်လိုက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးကြပ်မတ်ခန်း ICU တွင် နေရမည့်ရက်ပေါင်းမှာ ခွဲစိတ်ရာတွင် ရှုပ်ထွေးမှုရှိမရှိအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ICU တွင် ရှိသော စက်ကိရိယာများ မလိုအပ်တော့သောအခါ ဒုတိယအဆင့်အခန်းသို့ (ပုံမှန်အားဖြင့် ခွဲပြီးဒုတိယနေ့တွင်) ပြောင်းရပါသည်။ လူနာကို Open Hear Unit သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါသည်။ ထိုအခန်းတွင် လူနာကို…..
နမိုးနီးယား မ၀င်စေရန်အတွက် အသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်းနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ ချောင်းဆိုးစေခြင်း လုပ်စေပါသည်။
လူနာကို ခုတင်စောင်းတွင် ခြေထောက်တွဲလောင်းချ ထိုင်စေပါသည်။
ရင်ဘတ်အတွင်းထည့်ထားသောပိုက်များနှင့် ဆီးပိုက်ကို ဖြုတ်လိုက်ပါသည်။
အရည်ကြည်နှင့်စပြီး တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း အစာစားစေပါသည်။
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းလမ်းလျှောက်စေပါသည်။ ခြေကျင်းဝတ်ရောင်ရမ်းမှုလျော့စေရန်နှင့် သွေးခဲများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ မကြာမီရက်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် လူနာသည် အားအင်များပြန်ပြည့်လာပြီး လမ်းပိုလျှောက်နိုင်လာပါလိမ့်မည်။
Heart bypass surgery အတွက် ဆေးရုံတွင် နေရသည့်ရက်ပေါင်းမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ၅-၇ ရက်ခန့်ဖြစ်ပါသည်။
ကောင်းကောင်းနာလံပြန်ထလာနိုင်မည့်ကာလမှာ ၆ ပါတ်ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်အတွင်းတွင် ခွဲစိတ်ထားသောဒါဏ်ရာအနာသည် တစ်ဖြည်းဖြည်းကျက်လာပါလိမ့်မည်။ သို့သော် နည်းနည်းနီနေခြင်း၊ နာနေခြင်းနှင့် ဖောင်းနေခြင်း၊ရောင်နေခြင်း နည်းနည်းရှိနိုင်ပါသည်။ လူနာကို အကြံပေးလိုသည်မှာ…
ဒါဏ်ရာကို ဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့် နေ့စဉ်ဆေးကြောပြီး ခြောက်အောင်သုတ်သင့်ပါသည်။
ခွဲပြီးနောက်ပထမ တစ်ပါတ်၊ နှစ်ပါတ်အတွင်း ခွဲစိတ်ထားသည့် ဆရာဝန်နှင့် ပြန်ပြသင့်ပါသည်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ခွင့်ပြုလျှင် ဆယ်ပေါင်အလေးချိန်ကို မနိုင်ပါသည်။
လိင်ဆက်ဆံမှုကို သုံးပါတ်လေးပါတ်အတွင်း ပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
တစ်ညကို ၈-၁၀ နာရီ အိပ်စက်အနားယူပါ။
အနာသက်သာဆေးကို မကြာခဏသုံးခဲ့ရလျှင် ၀မ်းချုပ်ခြင်း အနည်းငယ် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားသည့် လူနာအများစုသည် ပုံမှန်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း သက်သာသွားပါလိမ့်မည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းနှစ်များကြာလာသည့်အခါ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ လိုအပ်သလို bypass ခွဲစိတ်မှု (သို့) သွေးကြောပြန်ပြင်ခြင်း (သို့) အခြားသော ကုသမှုများ လုပ်ရနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် မိမိ၏နေထိုင်မှုစတိုင်ကို ကျန်းမာသော နေထိုင်မှုစတိုင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါသည်။
ကိုယ်ခန္ဓာ၏အားများပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန် သုံးလခန့်ကြာပါသည်။ လူနာအများစုသည် ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး မောလွယ်ခြင်းနှင့် ခံနိုင်ရည် နည်းနေသေးခြင်းတို့ ရှိနေသေးပါမည်။ လူနာအများစုသည် ခြောက်လကျော်ပြီးချိန်တွင်မှ ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ပြန်ရောက်ရှိပါသည်။
လူနာအားလုံးလိုလိုသည် ခွဲစိတ်ပြီးနောက် နှလုံးကို မြန်မြန်နာလံပြန်ထလာစေသည့်နည်းလမ်းများ လုပ်ခြင်းဖြင့် အလွန်ကောင်းသည့် ရလာဒ်များရစေပါသည်။ ၄င်းမှာ နေ့စဉ်စားသောက်မှု၊ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုများအပါအ၀င် နေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူနာများ၏ကျန်းမာရေး အခြေအနေနှင့် အခြားအခြေအနေများ အလွန်ကွဲပြားကြသည့်အတွက် လူတစ်ဦးချင်းကိုလိုက်ပြီး လုပ်ရမည့်နည်းလမ်းများကို ကွာခြားပါသည်။
မိမိနေထိုင်မှုပုံစံကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ နှလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အပြုအမူ၊ အနေအထိုင်၊ အစားအသောက်တို့ကို ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ နှလုံးခွဲစိတ်ပြီးနောက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် bypass လမ်းလွှဲလုပ်ထား၊ ဆက်ထားသည့်နေရာတွင် ပြန်ပြီး ပိတ်နိုင်ခြေ ပိုများလာစေပါသည်။
သွေးပေါင်ချိန်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိန်းပါ။ သွေးကျဆေးသောက်နေရလျှင် ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း သေချာသောက်ပါ။
လိုအပ်လျှင် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် လျှော့ချပါ။ နေ့စဉ် လမ်းလျှောက် (သို့) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
ခွဲစိတ်ဒါဏ်ရာကောင်းမကောင်းသိရန် ဆေးရုံဆင်းပြီး တစ်ပါတ်/နှစ်ပါတ်အတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နှင့် ပြန်တွေ့ရပါသည်။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ပိုင်း သေချာကောင်းမွန်စွာ နာလံပြန်ထစေရန် နှလုံးအထူးကုက ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
Coronary artery bypass surgery သည် အကြီးစားခွဲစိတ်မှုဖြစ်သည်။ ၄င်း၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများမှာ…
အသက်ရှူခြင်းနှင့် အဆုတ်ဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ
ဟ့တ်အတက်ခ်၊ လေဖြတ်ခြင်း (သို့) သေဆုံးခြင်း
နှလုံးသွေးကြောလမ်းလွှဲ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းသည် နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ကုသမှုဖြစ်သည်။ သို့သော် နှလုံးရောဂါကို လုံးဝပျောက်ကင်းစေသည့် ကုသမှုမဟုတ်ပါ။ ခွဲစိတ်ကုသမှုကြောင့် ခံစားနေရသော ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာသွားပြီး အသက်ရှည်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်နှလုံးရောဂါကို ဖယ်ရှားလိုက်သည်မဟုတ်ပါ။
လူနာအနေဖြင့် မိမိ၏နှလုံးရောဂါကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအသောက်နှင့် နေထိုင်မှုပုံစံတို့ကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လူနာသည် မိမိ၏ဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန်ပြသသင့်ပြီး နှလုံးကို ထိခိုက်စေသော အကြောင်းအချက်များ ဥပမာ- သွေးထဲရှိ ကိုလက်စထရော အနည်းအများ၊ သွေးပေါင်ချိန်၊ ဆီးချိုတက်နေခြင်းရှိမရှိ တို့ကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပြီး မိမိ၏နှလုံးသွေးကြောရောဂါ အခြေအနေကို စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
Contact: Dr. Swe Swe Aye
Block 339A, #13-23,
Ph: 65-65644102, 65-94469930
e-mail: swesweaye (at) sppcare.com
Contact: Daw Kalayar Htun
Shwe Baho Laboratory Service
No. (1-33), Thamain Bayan Road
Ph: 95 1 545851, 545759, 548605 Ext. Lab
Ngwe Kywel Sin Clinic
No. 433, Kannar Road,
Tel: 95 1 705988
kalayarhtun (at) sppcare.com
kalayarhtun (at) gmail.com
Moblie: 09 5167931
Powered by MyanNet.